Official Website of CA Member Rabindra Adhikari – प्रश्नावली समितिले भोलिदेखि प्रश्न बनाउने
प्रश्नावली समितिले भोलिदेखि प्रश्न बनाउने
काठमाडौं । संविधानसभामा निर्णयार्थ पेश गर्न प्रश्नावली तयार पार्ने प्रस्ताव समितिको पहिलो बैठकले एक उपसमिति बनाएको छ ।
यो कार्यदलले समितिको काम कसरी अगाडि बढाउने र निर्णय प्रकृया के हुने भन्ने कार्यविधि तयार पार्ने छ ।
उपसमितिका संयोजक रमेश लेखक छन् भने सदस्यहरुमा अतहर कमाल मुसलमान, भानुभक्त ढकाल, किरण यादव, दिपक बोहरा, श्रीमाया थकाली र दिलनाथ गिरी छन् ।
समितिको बैठक सुरु हुनासाथ जेष्ठ सदस्यका रुपमा अध्यक्षता गरेका कूलबहादुर गुरुङले कार्यविधि निर्माणका लागि उपसमिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैठकले एमाओवादी सहितको विपक्षी गठवन्धनलाई समितिमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिको बैठक करिब दस मिनेट मात्र चलेको थियो । समितिको कार्यकाल आजका मितिबाट पाँच दिन हुनेछ । समिति आजबाट ५० सदस्यीय भएको छ । जनता दलका हरिचरण शाह विपक्षी गठवन्धन त्यागेर सत्तापक्षीय गठवन्धनमा लागेपछि उनी आजबाट समितिमा थपिएका हुन् ।
समितिका जेष्ठ सदस्य कूलबहादुर गुरुङ नेपालगञ्जबाट फर्कन ढिला भएकाले एक बजेका लागि निर्धारित बैठक ढिला सुरु गरिएको थियो ।
समितिको बैठक सकिनासाथ कार्यविधि बनाउने उपसमितिको बैठक बसेको छ । उपसमितिले भोलिभित्र कार्यविधि बनाउने र भोलि दिउँसो एक बजे बस्ने समितिको बैठकमा कार्यविधि पेश गर्ने जानकारी कांग्रेस सभासद पूर्णबहादुर खड्काले दिए । कार्यविधि बनेपछि मात्र प्रश्नावली बनाउने काम थालिने भएको छ । news vitta बाट
Saturday, January 31st, 2015	| Leaveacomment
Recent Activities	स्मृतिमा विनासकारी भूकम्प
OBOR for Nepal
स्थानीय तहका एजेन्डा
STV Chat With Rabindra Adhikari
साझा सवाल अंक ४७५ : युवा नेता
Latest Video	More About CPN-UML	Follow us On Twitter	RabindraADH@RabindraADH	RT @InspowerMinds:5Rules of Happiness: 1. Don't Hate 2. Don't Worry 3. Give More 4. Expect Less 5. Live Simply.	13 mins ago	RabindraADH@RabindraADH	जीवन जोगाउने घामले !
मुलुक बनाउने एमाले !!	37 mins ago	Interviews	राजनीति, प्रशासन, ठेकेदार र कन्सल्ट्यान्टबीच सेटिङ छ: रविन्द्र अधिकारी रवीन्द्र अधिकारीले नबिर्सिने आन्दोलन